नेपालमा फेरि देखियो यस्तो ख’तरा ! विज्ञहरुले दिए यस्तो चेतावनी पूरा पढ्नुहोस – Life Nepali
नेपालमा फेरि देखियो यस्तो ख’तरा ! विज्ञहरुले दिए यस्तो चेतावनी पूरा पढ्नुहोस
पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न शहरमा वायु प्रदुषण बढ्न थालेको छ। वातावरण विभागका अनुसार भक्तपुर, सिमरा, हेटौंडा र धनगढीमा वायुको गुणस्तर ख’स्केको हो। वायुको गुणस्तर एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्वुआई)मा मापन गरिन्छ। एक्वुआई ५० सम्म हुनु राम्रो हो, ५० देखि १०० सम्मलाई मोडरेट मानिन्छ। एक्वुआई १५० सम्म पुग्दा संवेदनशील समूहलाई अस्वस्थकर हुन्छ। *** याे समाचार काे पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला**
२०० सम्म पुगे सबैका लागि अस्वस्थ हुन्छ। एक्वुआई ३०० पुग्नु भनेको जो’खिमपूर्ण हो। ३ सयभन्दा माथि जानुचाहिँ घातक हो। विभागका प्रवक्ता इन्दुविक्रम जोशीका अनुसार मंगलबार सिमराको एक्वुआई ३०० पुगेको थियो भने हेटौंडामा २५० पुगेको थियो’बुधबार बिहान भक्तपुरमा एक्वुआई २२० र धनगढीमा २२३ पुगेको छ, काठमाडौंमा पनि पछिल्ला दिनमा प्रदुषण बढ्दै बढ्दै गएको छ,’ जोशीले भने।*** याे समाचार काे पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला**
उनले प्रि मनसुन सिजनमा यसपालि वर्षा नभएको र तराई क्षेत्रमा भइरहेको आगलागीले प्रदुषण बढाएको बताए।अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले आफ्नो वेवसाइटमा राखेका स्याटेलाइट तस्बिरहरूले चितवन र आसपासका जंगलमा भइरहेको आगलागीको असर हिमालसम्मै पुगेको देखाएको छ।*** याे समाचार काे पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला**
Previous प्रधानमन्त्रीको गृहनगरमा डेढ अर्बको भ्यू टावर किन ?
Next हार्दिक बधाई कंचनपुरकी संगीता नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट छनौट परीक्षामा पहिलो नम्बरमा !